၂ဝ၁၈ ပြက္ခဒိန်နှစ်မှာ ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ
30 Nov 2018 . 4:01 PM
ကဲ . . . နိုဝင်ဘာလလည်း ကုန်ပြီဆိုတော့ ၂ဝ၁၈ခုနှစ်ကြီးကို နှုတ်ဆက်ဖို့ ဒီဇင်ဘာလပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ အမှတ်ပေးဖလားပွဲတွေက အရင်ကထက် ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာခဲ့ပြီး ပြင်သစ်လီဂူးနဲ့ စီးရီးအေပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုရင် ချန်ပီယံရုပ်လုံးပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ၂ဝ၁၈ ပြက္ခဒိန်နှစ်မှာ ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားက ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းက စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလာပါတယ်။ ၂ဝ၁၈ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁) ကနေ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်အတွင်း လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ ကလပ်အသင်းတွေအတွက် သွင်းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးအရေအတွက်ကို မူတည်ပြီး ၂ဝ၁၈ ပြက္ခဒိန်နှစ်မှာ ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားကို ဆုံးဖြတ်တာပါ။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူး Lionel Messi က (၄၅) ဂိုး သွင်းယူထားပြီး အဓိကပြိုင်ဘက် ဂျူဗင်တပ်တိုက်စစ်မှူး Cristiano Ronaldo က (၄၄) ဂိုးရှိနေပါတယ်။ သူတို့နောက်မှာတော့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တိုက်စစ်မှူး Lewandowski က (၄၁) ဂိုးနဲ့ လီဗားပူးတိုက်စစ်မှူး Mohamed Salah က (၃၇) ဂိုးအထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝ၁၈ ပြက္ခဒိန်နှစ်မှာ ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားနေရာမှာ Lionel Messi နဲ့ Cristiano Ronaldo တို့ကပဲ ဆွတ်ခူးသွားဟန်ရှိပြီး ဒီဇင်ဘာတစ်လလုံး ကျန်သေးတာဆိုတော့ ဘယ်သူအသာရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ စောပါသေးတယ်။
Lionel Messi ဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့အတူ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ Villarreal (အိမ်ကွင်း) ၊ Cultural Leonesa (အိမ်ကွင်း) ၊ Espanyol (အဝေးကွင်း) ၊ Tottenham Hotspur (အိမ်ကွင်း) ၊ Levante (အဝေးကွင်း) နဲ့ Celta Vigo (အိမ်ကွင်း) တို့နဲ့ ကစားဖို့ရှိသလို Cristiano Ronaldo ကလည်း ဂျူဗင်တပ်အသင်းနဲ့အတူ Fiorentina (အဝေးကွင်း) ၊ Inter Milan (အိမ်ကွင်း) ၊ Young Boys (အဝေးကွင်း) ၊ Torino (အဝေးကွင်း) ၊ Roma (အိမ်ကွင်း) ၊ Atalanta (အဝေးကွင်း) နဲ့ Sampdoria (အိမ်ကွင်း) အသင်းတွေကို ဒီဇင်ဘာလမှာ ကစားဖို့ရှိပါတယ်။ ၂ဝ၁၈ ပြက္ခဒိန်နှစ်မှာ ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ဖို့ဆိုရင် လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကို ဂိုးသွင်းဖို့ လိုအပ်နေပြီး ၂ဝ၁၇ ပြက္ခဒိန်နှစ်မှာ ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားက စပါးတိုက်စစ်မှူး Harry Kane (၅၆ ဂိုး) ဖြစ်ပါတယ်။
၂ဝ၁၈ ပွက်ခဒိနျနှဈမှာ ဂိုးသှငျးအမြားဆုံးကစားသမားက ဘယျသူဖွဈမလဲ
ကဲ . . . နိုဝငျဘာလလညျး ကုနျပွီဆိုတော့ ၂ဝ၁၈ခုနှဈကွီးကို နှုတျဆကျဖို့ ဒီဇငျဘာလပဲ ကနျြပါတော့တယျ။ အမှတျပေးဖလားပှဲတှကေ အရငျကထကျ ပွိုငျဆိုငျမှုပွငျးထနျလာခဲ့ပွီး ပွငျသဈလီဂူးနဲ့ စီးရီးအပွေိုငျပှဲတှမှောဆိုရငျ ခနျြပီယံရုပျလုံးပျေါခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ အခုခြိနျမှာ ၂ဝ၁၈ ပွက်ခဒိနျနှဈမှာ ဂိုးသှငျးအမြားဆုံးကစားသမားက ဘယျသူဖွဈမလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးက စိတျဝငျစားစရာ ကောငျးလာပါတယျ။ ၂ဝ၁၈ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ (၁) ကနေ ဒီဇငျဘာလ (၃၁) ရကျအတှငျး လကျရှေးစငျအသငျးနဲ့ ကလပျအသငျးတှအေတှကျ သှငျးယူခဲ့တဲ့ ဂိုးအရအေတှကျကို မူတညျပွီး ၂ဝ၁၈ ပွက်ခဒိနျနှဈမှာ ဂိုးသှငျးအမြားဆုံးကစားသမားကို ဆုံးဖွတျတာပါ။
လကျရှိအခြိနျမှာတော့ ဘာစီလိုနာတိုကျစဈမှူး Lionel Messi က (၄၅) ဂိုး သှငျးယူထားပွီး အဓိကပွိုငျဘကျ ဂြူဗငျတပျတိုကျစဈမှူး Cristiano Ronaldo က (၄၄) ဂိုးရှိနပေါတယျ။ သူတို့နောကျမှာတော့ ဘိုငျယနျမွူးနဈတိုကျစဈမှူး Lewandowski က (၄၁) ဂိုးနဲ့ လီဗားပူးတိုကျစဈမှူး Mohamed Salah က (၃၇) ဂိုးအထိ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ၂ဝ၁၈ ပွက်ခဒိနျနှဈမှာ ဂိုးသှငျးအမြားဆုံးကစားသမားနရောမှာ Lionel Messi နဲ့ Cristiano Ronaldo တို့ကပဲ ဆှတျခူးသှားဟနျရှိပွီး ဒီဇငျဘာတဈလလုံး ကနျြသေးတာဆိုတော့ ဘယျသူအသာရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖွတျဖို့ စောပါသေးတယျ။
Lionel Messi ဟာ ဘာစီလိုနာအသငျးနဲ့အတူ ဒီဇငျဘာလအတှငျးမှာ Villarreal (အိမျကှငျး) ၊ Cultural Leonesa (အိမျကှငျး) ၊ Espanyol (အဝေးကှငျး) ၊ Tottenham Hotspur (အိမျကှငျး) ၊ Levante (အဝေးကှငျး) နဲ့ Celta Vigo (အိမျကှငျး) တို့နဲ့ ကစားဖို့ရှိသလို Cristiano Ronaldo ကလညျး ဂြူဗငျတပျအသငျးနဲ့အတူ Fiorentina (အဝေးကှငျး) ၊ Inter Milan (အိမျကှငျး) ၊ Young Boys (အဝေးကှငျး) ၊ Torino (အဝေးကှငျး) ၊ Roma (အိမျကှငျး) ၊ Atalanta (အဝေးကှငျး) နဲ့ Sampdoria (အိမျကှငျး) အသငျးတှကေို ဒီဇငျဘာလမှာ ကစားဖို့ရှိပါတယျ။ ၂ဝ၁၈ ပွက်ခဒိနျနှဈမှာ ဂိုးသှငျးအမြားဆုံးကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျဖို့ဆိုရငျ လကျကနျြပှဲစဉျတှကေို ဂိုးသှငျးဖို့ လိုအပျနပွေီး ၂ဝ၁၇ ပွက်ခဒိနျနှဈမှာ ဂိုးသှငျးအမြားဆုံးကစားသမားက စပါးတိုကျစဈမှူး Harry Kane (၅၆ ဂိုး) ဖွဈပါတယျ။